कुनै पनि तथ्यले तर्क गर्नेछ कि प्राकृतिक फर बाट चीजहरू सधैं सुन्दर र सुरुचिपूर्ण देखिन्छ। फर मा लुगा लगाउने, एक महिलाले अरूलाई आफ्नो उच्च स्थिति र राम्रो स्वादको बारेमा सुरक्षित रूपमा बताउन सक्षम छन्। तर यदि फर फर कोट र फर वेस्टको मितिमा, कुनै पनि आश्चर्यचकित भएन कि पोंओको एक विशेष र लुगाको मूल भाग जारी छ। मूल्य र गुणस्तरको आदर्श अनुपात माइंक मोडेल हुन्।
मंक बाट फर फरोको
निस्सन्देह, बाह्ररीको यो टुक्रा छोटो कोटको रूपमा सहज छैन। यो निश्चित रूपमा सार्वजनिक यातायातको लागि डिजाइन गरिएको छैन, न त यो गाडी चलाउन सुविधाजनक छ। यसैले, यो भन्न सकिन्छ कि एक मंक फर पोंगो हरेक रोजाइको लागि कुनै चीज छैन।
आधुनिक मोडेल विभिन्न लम्बाईमा आउँदछ, फ्लाइन्डर सिधा, विस्तृत आस्तीन वा स्लिट्सको साथ। सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्, एक मोडेल एकदम व्यापक थाहा कम कम विकास को केटीहरु मा बदसूरत हुनेछ, तर पूर्ण महिलाहरूले यसको आकार को कमजोरी लुकाउन प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईं विभिन्न प्रकारका कपडाहरूसँग एक झन्डाबाट फर फर पोंचो पहन सक्नुहुनेछ। यो स्कर्ट र पतलून संग, साथ साथै जीन्स र leggings संग सुन्दर देखिन्छ। यदि तपाईं ड्रेस वा स्कर्टको साथ एक पोंचो लगाउने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, ध्यान दिनुहोस् कि यो युगलमा मात्र एक मात्र कुरा हुन सक्छ।
यस सीजनमा सबैभन्दा स्टाइलिश मोडेल एक हुडसँग मिंक पोंओको हो। यस्ता बाह्य कपडाहरूमा तपाईलाई कुनै पनि खराब मौसमबाट विश्वसनीय रूपमा सुरक्षित गरिनेछ, र हूडले तपाईंलाई टोपी लगाउनदेखि बचत गर्नेछ, स्टाइलको सुन्दरता संरक्षण गर्दा।
केही डिजाईनरहरूले विभिन्न प्रकारका फरबाट संयुक्त रुपमा मोडेल मोडेल मोडेलहरू प्रदान गर्छन्। उदाहरणका लागि, एउटा मङ्क र आर्कटिक फ्याक्स वा मिङ्क र फ्याक्स। एक उपयुक्त छनौट शैली संग, यस्तो कुरा को प्रभाव सिर्फ आश्चर्यजनक हुन सक्छ।
फर्सोइस मंजिलमा पोशाक
महिलाहरु को लागि मूल बुना भयो चीजहरु
महिलाको सर्दिया जूता फर संग
गर्भवती महिलाहरु को लागि बरसात
टुलिप स्कर्टको लागि
आधा धूप स्कर्ट
छोटो लुगाहरू - नयाँ सिजनको सबैभन्दा सुन्दर र फैशनेबल मोडेल
महिलाको न्यानो कमरकोट
छोटो डेनिम शर्ट
महिलाको लामो भेडाकोट कोट
हिराङ - क्यालोरी सामग्री
स्वर्गदूतले के जस्तो देखिन्छ?
स्वेटरको ओभरराइज - सबैभन्दा फैशनेबल मोडल र के यो मौसममा के गरौं?
Plasticine र cones देखि शिल्प
डेमोडेटिक आँख - लक्षण र उपचार
बादाम तेलका साथ कपालको लागि मास्क
नाशपाती "अगस्टो ओभर" - विविधता को विवरण
कालो कवरेज - राम्रो र खराब
गर्मीको समयमा सडकमा बच्चाहरुका लागि खेलकुद प्रतियोगिहरु
चालमा मेरो आफ्नै हातमा
बच्चा किन कुकुर छ?
फैशनेबल छोटो बालबालिका 2015
कसरी आफ्नै हातले ग्रीनहाउस निर्माण गर्ने?
Tivoli पार्क (Ljubljana)